ACS uye Atlantia kutora bhidha yeAbertis | Ehupfumi Zvemari
ACS uye Atlantia kutora bhidha yeAbertis
Chekupedzisira, imwe yenyaya dzinotarisirwa kwazvo dzakasimbiswa nemisika yemari uye chikamu chakanaka chevashambadzi vadiki nepakati. Haisi imwe kunze kwekambani yekuvaka ACS, kuburikidza neHotchief, yakasimbisa chibvumirano "chinosunga" chekutanga a Joint nyoro yekupa nezvaAbertis. Mune chirevo chakatumirwa kuNational Securities Market Commission (CNMV), kambani yakazivisa kuti Hotchief ichachinja chikumbiro chayo - ichibvisa kutariswa kwezvikamu - kuitira kuti ma18,36 euros mugove ubhadharwe zvizere nemari.
Kunyangwe iyi yaive yatove nhau yaitarisirwa nevamiriri vezvemari, haina kutadzisa zvikamu zvekambani inotungamirwa naFlorentino Pérez kubva mukukoshesa nekusimba kukuru. Kusvika padanho rekuti zviito zvavo zvine yakakwidzwa nezve 8%. Mukuvhiya uko, izvozvi, kwave kunobatsira kwazvo kune vagovana navo. Chimwe chinhu chakasiyana zvakanyanya ndechekuti zvichave zvakadaro kubva ikozvino. Nekuti zvirizvo, hazvigone kutongwa kunze kuti mune pfupi nzvimbo yenguva yakakosha kugadziriswa mumitengo yavo kunogona kugadzirwa. Tichafanirwa kumirira kwenguva yakati rebei kuti tione mashandiro awaita akamirirwa kwenguva refu akakukodzera.
Kune rimwe divi, guta guru rekambani yakanyura richava ne 30% kugoverwa kweACS. Ichi ndicho chinhu chinofanirwa kuongororwa nevezvemari kuti vaone kubatsira kwebasa racho. Saka kuti nenzira iyi, iwe uve nerakavimbika uye rwakanangana neruzivo nezve kana zvakakodzera kutenga zvikamu zvavo mumavhiki anotevera. Chero zvazvingaitika, inomiririra nhanho kumberi kune iyo kambani yekuvaka yeSpain yekuwedzera mitsara yayo yebhizinesi. Kune iyo inofanirwa kuwedzerwa mashandiro ebhizinesi iri richakanganisa zvikamu zvaro. Chinhu chisati chafungidzirwa neakasiyana ongororo idzo dzakaparadzirwa mukati memazuva ano.
1 ACS iri kutengesa kutenderera makumi matatu neshanu euros
2 Mamiriro ezvinhu echibvumirano chebhizinesi
3 Pachine mukana muIbex 35
4 ACS: kukosha kwakatendeka
5 Mapurojekiti matsva eACS
ACS iri kutengesa kutenderera makumi matatu neshanu euros
Kuita kwemisika yemari hakuna kumbove kure kuuya uye mushure mekudonha mumitengo yavo yadzokera kumatanho ayo epakutanga. Kusvika wasvika pamatanho padyo padyo ne33 euros pamugove vhiki ino. Kwete zvisina maturo, zvirevo zvemutungamiriri we ACS, Florentino Pérez, mupfungwa yekuti "mubatanidzwa uyu unogara kwenguva yakareba" unogona kukwidza mutengo wemasheya kusvika kumatanho anodikanwa kupfuura ayo akataurwa panguva ino. Mupfungwa iyi, shanduko yemazita e kambani yekuvaka Sipanish yakagara kwenguva refu pakati pe30 ne33 euros pamugove. Iyi ingave iri nguva yekuzvikunda here?
Nekuti hazvigone kukanganwika kuti iwo mazamu mumitengo yavo ari pamatanho ema 35 euros. Benchmark iyo inogoneka kwazvo kurova mune anotevera ekutengesa zvikamu. Nekudaro, zvese zvinoenderana nezvinzvimbo zvakabvumiranwa pakati vatengi uye vatengesi. Nekuti hazvigone kutongwa kunze kuti panguva yakati rebei kana isingagumi yenguva panogona kuve nekugadziriswa uko kunototungamira kune zvikamu zvekambani ino pazasi pe30 euros. Kunyangwe chinhu chikuru ndechekuti inoramba iri munzira yakajeka kumusoro kuti itangezve kutenga nechinangwa chemwedzi mishoma kana makore.
Mamiriro ezvinhu echibvumirano chebhizinesi
Nezve maitiro aya anotarisirwa mashandiro ebhizinesi anga aripo, pane tsamba diki muchibvumirano chekuti zvakakodzera kuongororwa. Saka kuti iwe ugone kupa zvimwe zvinongedzo nezve iro basa ratinofanira kutamba sediki uye wepakati investor. Zvakanaka, chimwe chezvinhu zvechibvumirano ndechekuti mapato maviri anobvumirana kuwedzera hukama hwehukama pamwe nekubatana pakati pemakambani matatu anobatanidzwa mukuita. Kune rimwe divi, iri zvakare kumubhadharo wezvingaitika kune inodiwa mari yekubhangi. Chaizvoizvo imwe yemapoinzi anochengeta kusahadzika kwakanyanya kune vevashambadzi uye izvo zvinogona kukanganisa shanduko yekambani yekuvaka yeFlorentino Pérez.
Chero zvazvingaitika, kana chinangwa chako panguva ino chiri chekuzvimisikidza iwe mukukosha, zvirinani kumirira mazuva mashoma uye kugaya iyo zvibvumirano. Chinhu icho kusvikira nhasi hachina kujeka uye chinogona kutungamira zviito zveACS kutungamirwa mune imwe nzira kana imwe. Kumirira kwemazuva mashoma kunogona kukubatsira kuti uite sarudzo yako pasi pezvikamu zvakachengeteka kuita kuti basa riite purofiti. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kuwana mari yakawanda nemari iyi kubva nhasi zvichienda mberi. Nekuti chenjedzo inofanirwa kunge isina nzvimbo yemazuva ano dhinomineta yezviito zvako mumisika yemari.
Pachine mukana muIbex 35
Imwe yemabatiro mhedzisiro yeiyi yakakura-chikamu bhizinesi kushanda ndeyekuti mugwagwa mukuru unobvumirana Abertis icharega kunyorwa pamisika yemari. Zvese munyika nekunze kwemiganhu yedu. Ichi chiito chinoreva kuti indekisi inosarudza yemusika weSpanish wemusika, Ibex 35, kubva nhasi zvichienda mberi yave nemutengo wakaderera. Ndokunge, makumi matatu neshanu pachinzvimbo cheiyo inowirirana makumi matatu neshanu. Kunyangwe mamiriro aya asingagare kwenguva refu nekuti mumazuva mashoma anotevera kuchinjirwa kuchasarudzwa kuti vapinde kirabhu yakasarudzwa yevarimi. Hazvishamise kuti runyerekupe rwuri kutobuda pamusoro peanotevera nhengo yeIbex 35.
Uku kudomwa kuchaita kuti vanokwikwidza vapinde muindekisi iyi vatange kuratidza kusagadzikana mumitengo yavo. Neiyo inogona kuve imwe sarudzo yekuita kuti mari ibesere kubva kuchirongwa chekudyara. Nekuti kazhinji kuchengetedzeka kunoitika kuburikidza neiyi nzira kunowanzoitika kuburikidza nehurongwa hwekudzokorora kwemaresi avo. Vanogona kukwira kumusoro pakati pe3% ne8%, zvichienderana nekufamba kwevatengesi. Mune zvimwe zviitiko, semuenzaniso wakajeka wekupinda zvinzvimbo. Kunyangwe panguva yekunyorwa paIbex 35 ivo vanowanzo kuvandudza zvakanyanya mutengo mutengo. Chero zvazvingaitika, uchafanirwa kutora mafambiro aya uchifunga kubva ikozvino.
ACS: kukosha kwakatendeka
Ehe, kambani yenyika yekuvaka ndeimwe yeanoremekedzwa kukosha emusika weSpanish wemusika. Zuva rega rega zviuru nezviuru zvekuchengetedzeka zvinotsinhaniswa kudzamara yava imwe yemadziviriro emvura pamusika. Iko kuremerwa chaiko kweavo vashoma uye vepakati varimi vanoita zvakanyanya. Kune izvi zvese isu tinofanirwa kuwedzera kuti inopa dividendi yezvikamu zvinopfuura kunakidza. Iine avhareji purofiti yegore rega kutenderera 5% uye kuti vanozvigovera pakati pevashandi vavo kuburikidza nemari mbiri dzegore. Saka ivo vanogona kugadzira yakatarwa mari yekudyara mukati meiyo kusiana. Iyo imwe yemamwe mikana iyo ACS inogovera inokupa panguva ino.
Kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa kuti ikambani yakatsiga uye nekudaro haina kunyanya kukupa iwe unoshamisa kutyisa mudanho rako semushambadzi. Mumakore achangopfuura, masheya ayo anga achifamba mune inoratidzika kunge yakamanikana swath. Pakati pe28 ne34 euros pamugove uye kudzoka kwayo kunotevera pakubhadharwa kwezvikamu. Imwe yekiyi dzekuda kuzadzikisa zvinangwa zvakanyanya ndedzekuputsa chipingamupinyi chemamiriyoni makumi matatu nemashanu. Iri danho rakakosha kuti iwe ugadzire uptrend, zvirinani munguva pfupi nepakati.
Mapurojekiti matsva eACS
Kana isu hatikwanise kukanganwa mapurojekiti mune imwe yemakambani ekumaka ekuvaka emakambani eSpanish akaumbwa. Kunyanya, imwe yekupedzisira iyo raini yayo yebhizinesi yagadzira ndeyekuti yakapihwa a kondirakiti muCanada Zvekuvaka kwenzira dzedhiri uye chiteshi chegwenya remagetsi remagetsi remutengo wakakwana wemamirioni chiuru euros. Ichi chiito chinogona kubatsira kukosha kwayo mumisika yezvemari kuti iwedzere, kunyangwe iri shoma nzira maererano nemhinduro yevatengi vatsva.
Nekuzadzikiswa kwechirongwa ichi, Dragados inosimbisa bhizinesi rayo mu hydraulic works musika mune yakasarudzika musika yakakosha seCanada. Mupfungwa iyi, zvinocherechedzwa kuti North America yatove kutanga musika we ACS, ichiteverwa neAustralia. Gore rapfuura, nzvimbo iyoyo yakaratidza mari inosvika mamirioni e14.669 kuboka, iro rinomiririra pamusoro pe45% yehuwandu hwebhizinesi rayo. Chinhu chinokosheswa zvakanyanya nevashambadzi vadiki nepakati kana vachiita yavo sarudzo yekuti votenge kana zvavo.
Chero zvazvingaitika, pane chinhu chimwe chiri pachena kwazvo panguva iyoyo uye ichocho ndechekuti ACS ndiyo imwe yenzvimbo dzinotyisa mumusika weSpanish unopfuurira. Inguva yekubatana iyo iwe yaunogona kutora mukana wekuti unyatso shandisa yako wega kana yemhuri nhumbi. Kunze kwemamwe marongero aunogona kushandisa kubva panguva dzino chaidzo. Hazvishamisi kuti zvese zvinoita kunge zvinoratidza kuti pane zvakawanda zvaunofanira kuwana pane kurasikirwa. Kunyangwe uchiita nekungwarira mumafambiro aunoita kubva kumavhiki anotevera kana kunyangwe mazuva. Nekuti zvirokwazvo ivo havana njodzi, kunyangwe vari vashoma sei.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » ACS uye Atlantia kutora bhidha yeAbertis
Inguva yekudyara mumisika irikubuda?
Mamogeji anoshanda sei?